Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Jolay, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Jolay, 2010
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Jolay, 2010
Ejipta 29 Jolay 2010
Namoaka tatitra manokana momba an'i Ejipta sy ny hoaviny taorian'ny Filoha Hosni Mubarak ny The Economist, olona voatondro ho marary sain'ny taonjato faha-21 any Afovoany Atsinanana. Manana izay nolazainy ireo Ejiptiana mpitoraka blaogy.
Iràna 29 Jolay 2010
Mihoatran'ny 70 ireo mpianatry ny anjerimanontolo Iraniana sy ireo mpianatry ny ambaratonga ambony no mitaky [fa] ny famotsorana an'i Hamed Saber, mpitoraka blaogy an-tsary Iraniana sy mpikirakira solosaina voasambotra noho ny antony tsy fantatra ny 21 Jona 2010 tany Tehran
Alzeria 27 Jolay 2010
Jordania 24 Jolay 2010
Araka ny voalazan'ny Next Web – Middle East, manonona ny vohikala Ammannet, dia voasambotra ny mpianatra Jordaniana iray miofana momba ny solosaina, mitondra ny anarana hoe Imad Al-Ash, nanomboka ny volana Febroary 2010, ary nosazian'ny fitsarana mpiaro ny fiandrianam-pirenena ny 13 Jolay 2010 teo ho tazonina an-tranomaizina mandritry ny roa...
Maraoka 22 Jolay 2010
Iràna 22 Jolay 2010
Ejipta 20 Jolay 2010
Izay natomboky ny Ejiptiana iray mpitoraka blaogy tao amin'ny Twitter ho toy ny fandinihana fotsiny ihany momba ny vehivavy tsy tokony hifanomezanao fotoana dia namadika ity sehatry ny fitoraham-bolongana kiritika ity ho tanin'ady. Tweets maro avy any Ejipta sy avy amin'ny lafintany rehetra no niditra an-tsehatra nanampy ireo mpifanandrina. Mitatitra izany avy any ambava-ady i Tarek Amr.
Palestina 19 Jolay 2010
Ny mpitsoa-ponenana Palestiniana no iray isan'ny betsaka indrindra amin'ireo vahoaka nafindra-monina maneran-tany, miaraka amin'ny Masoivohon'ny Firenena Mikambana misahana ny Asa sy Fanampiana ny mpitsoa-ponenana ao Palestina any Proche Orient (UNRWA) izay mitondra fanampiana ho ana mpitsoa-ponenana voasoratra anarana efa ho 4.7 tapitrisa any amin'ny faritra Palestiana bodoina, Jordan, Libanona ary Syria. Mbola an-tapitrisany koa ireo Palestiniana nafindra monina sy mpitsoa-ponenana miaina eran'izao tontolo izao. Na izany aza, lalim-paka ny fifikiran'izy ireo amin'ny tanindrazana nilaozan'izy ireo, na ny raiamandreniny na ny raibe sy renibeny any aoriana any. Mpitoraka blaogy roa avy ao Gaza no nanoratra momba ny hirifirin'izany hoe an-tsesitany.
Egipta: mpitoraka blaogy navotsotra rehefa voatana an-tranomaizina nandritra ny roa taona mahery
Ejipta 17 Jolay 2010
Zanakavavin'i Mos'ad Abu Fagr Taorian'ny fitanana azy an-tranomaizina nandritra ny telo taona teo ho eo izay, dia novotsorina tamin'ny Talata, 13 Jona, 2010 ihany ilay mpitoraka blaogy Ejiptiana Mus'ad Abu Fagr. Na dia efa mihoatra ny valo aza ireo didy famotsorana azy hatramin'ny nahavoasambotra azy ny 26 Desambra 2007, dia...